zawlat's Page - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
Blog PostsDiscussions (8)EventsGroups (2) zawlat's Likes Zawlat's Friends
View All zawlat's Groups
ရောင်းကြ ရောင်းကြ ..... နှစ်ကုန်ပိုင်း Computer ဈေးရောင်းပွဲများ....
zawlat has not received any gifts yet
zawlat replied to IT CrAzY's discussion ကျုပ်တို့ မြန်မာပြည်က IT သမားဘ၀"ကျုပ်တို့ မြန်မာပြည်က IT သမားဘ၀
ကျွန်တော်အမြင် လူငယ်တွေဟာ…"Apr 14, 2012zawlat replied to pyiphyomgmgsoe's discussion Programming နဲ့ Networking ဟာ concept တွေတူယုံတင်မကဘူး လင်နဲ့ မယားလိုပါဘဲ လို့ အတူတူနေတယ် . . ."မှန်ပါတယ် အကို ...
Programer တစ်ယောက်က Source Code တွေပဲသိထားရုံနဲ့ အဆင်မပြေပါဘူး......
Network & Hardware & Mobile တွေကိုလဲ အထိုက်အလျှောက်သိထားဖို့လိုမယ်...
တစ်ခုတော့…"Mar 6, 2012zawlat replied to AungAungAyeOo's discussion world စီပွားပျက်ကပ် ၂၀၁၀ ရွှေးကောက်ပွဲနဲ့ ဘွဲရအလုပ်လက်မဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်"Programာer တစ်ရောက်... လခ.... ၃၀၀၀
ဘာလဲဗျ မြန်မာပြည် က ပညာတက်.....လခ...................
ဒါပေမယ်လေ.... နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဆင်ပြေအောင် .. တွေးကြည့်ရအောင်.......
Programာer လို့ အမည်တက်... C++,Java,VB Dot Net,…"Jan 24, 2010zawlat commented on cho wut hmone's group KMD"ဒီနေ့ပေါ့ဗျာ....၂၄.၁.၂၀၁၀ပေါ့......
ဘာပဲပြောပြော ကိုယ့် ၈ နှစ်နည်းပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်ဟာ...
ဒီနေ့.. နှစ်ပတ်လည်ပွဲလေးကျင်းပနေတာ သတင်းကြားလိုက်တော့ ရင်ထည်းမှာတော့…"Jan 24, 2010zawlat replied to everdrinker007's discussion ကွန်ပျူတာက usb ကိုမသိလို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ"driver software စမ်းကြည် ပါအုံး"Dec 28, 2009zawlat postedadiscussionရောင်းကြ ရောင်းကြ ..... နှစ်ကုန်ပိုင်း Computer ဈေးရောင်းပွဲများ....၂၀၀၉ အကုန်ပိုင်း မှာလဲ Computer ဈေးရောင်းပွဲများကို ရန်ကုန် မန္တလေး နှင့် မုံရွာ မြို့တွေမှာကျင်းပမည်လို့ကြားသိရပါသည်၊၊တကယ်ရော လျှော့ရောင်းကြမှာလား?See MoreDec 23, 2009 0
At 2:59pm on June 2, 2010, KyiSin said… Long time no See with You , Zaw Min Gyi. ) Glad to See you in here. No comments yet!